တတိယမြောက် ပန်းသီးတစ်လုံး၏ ဘဝ အချိုးအကွေ့ များ - ၁ (M-Media Blog ကဏ္ဍ) - News @ M-Media
တတိယမြောက် ပန်းသီးတစ်လုံး၏ ဘဝ အချိုးအကွေ့ များ – ၁ (M-Media Blog ကဏ္ဍ)
in M-Media Blog — January 29, 2013
ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၃
M-Media- Blog ကဏ္ဍ
” သင်..သေပြီး ပုပ်ဆွေးသွားတာနဲ့ သင့်ကို အများက မေ့လျော့ သွားတာမျိုး ဖြစ်စေချင်ရင် ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တာ.. .ရေးသင့်ရေးထိုက်တာ… လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ လုပ်ခဲ့ပါ ” ( Benjamin Franklin )
ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ အကြီးအကျယ် အခမ်းအနားဆုံး ပန်းသီးသုံးလုံး ရှိခဲ့ပါတယ်….တနည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲ စေတဲ့ ပန်းသီး သုံးလုံး ဆိုလည်း မမှားပါဘူး…အဲဒီ ပန်းသီး သုံးလုံးကတော့…
ကမ္ဘာဦး ဖခင်ကြီး အာဒမ်ရဲ့ ပန်းသီး… (ဘာသာရေး ရှူ့ ထောင့်မပါ)
Steve Jobs ရဲ့ ပန်းသီးပါပဲ…
ပန်းသီး သုံးလုံးထဲက နောက်ဆုံး တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ Steve Jobs အကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်တာတွေကို တင်ပြလိုပါတယ်… Apple Computer နဲ့ Pixar Animation Studios မှာ CEO အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး ( တတိယမြောက် ပန်းသီး ) လူသားဖြစ်တဲ့ Steve Jobs က ၂၀၀၅ ဇွန်လ ၁၂ရက် နေ့ မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Stanford University မှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့် ခွန်းပါ… သူက အဲဒီ မိန့် ခွန်းမှာ သူ့ ဘဝရဲ့အဓိကကျတဲ့ အချိုးအကွေ့ သုံးခု အကြောင်းနဲ့ အဲဒီ အချိုးအကွေ့ တွေ အပေါ် သူ ဘယ်လို လက်ခံ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြသွားပါတယ်….အဲဒီ အချိုးအကွေ့ သုံးခုကတော့…
(၁) ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း ( Connecting the Dots )
(၂) ချစ်ခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှု ( Love & Loss )
(၃) သေခြင်းတရား ( Death )
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ဘွဲ့ရ မောင်မယ်များကို တွေ့ဆုံ စကားပြောခွင့် ရတဲ့အတွက်ကြောင့် အင်မတန် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ကျွန်တော် ပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်ဟာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အပြင် ဒီနေ့ လို ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားဆိုတာ ဒါ ပထမဆုံး တက်ဖူးခြင်းပါ။ ဒီနေ့ အခမ်းအနားမှာ ကျွန်တော့်ဘဝ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ သုံးခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်… မိန့်ခွန်း အရှည်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး. ကြီးကျယ်တဲ့ အကြောင်းတွေလည်း မဟုတ်ရပါဘူး…
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဇာတ်လမ်းသုံးပုဒ် ထဲပါ။
ဇာတ်လမ်း (၁) ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း (Connecting the Dots )
တကယ်တော့ Reed ကောလိပ် မှာ ကျွန်တော် ကျောင်းတက်ခဲ့တာ ခြောက်လထဲပါ…ပြီးတော့ ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျောင်းကမခွါနိုင်သေးပဲ နောက်တစ်နှစ်ခွဲလောက် အတန်းတွေဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတယ် ထင်ပါသလဲ???
ဒီ အကြောင်းကိုပြောရရင် ကျွန်တော်မမွေးခင် အချိန်ကစပြီး ပြောပြရမှာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်ဝန် ရှိတဲ့ အချိန်မှာ အမေဟာ အိမ်ထောင် မရှိသေးတဲ့ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်ကို မွေးစားဖို့ ပေးလိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို မွေးစားမယ့် မိဘများဟာ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေသာ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ အမေ့ စိတ်ထဲမှာ အကြီးအကျယ် စွဲနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဥပဒေပညာရှင် တစ်ယောက်နဲ့ သူ့ဇနီးတို့က ကျွန်တော့်ကို မွေးပြီးပြီးချင်း လွှဲယူလိုက်ဖို့ ကြိုတင် စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့်ကို “အူဝဲ”ဆိုပြီး မွေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူတို့က မိန်းကလေးမှ လိုချင်ပါတယ်လို့ စိတ်ပြောင်း သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အချိန်မတော် ညကြီး သန်းခေါင်မှာ မွေးစား မိဘလောင်း တန်းစီစာရင်းထဲက ကျွန်တော့်မိဘများကို ဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက် ရထားတယ်။ ယူမလား…” တဲ့။ မိဘများကလဲ “သိပ်ယူတာပေါ့…” တဲ့။
အဲဒီလို ပေးလိုက်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမေဟာ ဘွဲ့ရပညာတတ်မဟုတ်တာ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖေဟာလဲ အထက်တန်းကျောင်းတောင်မှ မအောင်တာကို ကျွန်တော့် မွေးမိခင်က သိသွားတာပါ။ မွေးမိခင်ဟာ မွေးစားစာချုပ်မှာ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ထိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ နောင်လပေါင်း အတော်ကြာပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ မိဘတွေက
ကျွန်တော့်ကို “တက္ကသိုလ် ထားပေးပါ့မယ်…” လို့ ကတိပေးမှ မွေးမိခင်က စိတ်လျော့ပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တာပါ။
နောင် ၁၇ နှစ် အကြာမှာတော့ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ အဆင်အခြင် ကင်းမဲ့စွာနဲ့ Stanford တက္ကသိုလ်နီးပါး စားရိတ်ကြီးတဲ့ တက္ကသိုလ်ကို ရွေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ တတ္ကသိုလ် ပညာရေးအတွက် အခြေခံလူတန်းစား မိဘများရဲ့ စုငွေတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် သုံးမိရက်သား ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်ခြောက်လ အကြာမှာတော့ ဒီပညာ ရေးဟာ တကယ်ပေးရတာနဲ့ တန်တယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်တော့ပါဘူး။
အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော့်မှာ ဘဝရည် မှန်းချက်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ တတ္ကသိုလ်ပညာရေးကနေပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဝ ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အဖြေထုတ်ပေးနိုင်မယ် ဆိုတာလဲ စဉ်းစားလို့ မရခဲ့ပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ဟာ မိဘတွေရဲ့ တစ်သက်စာစုငွေကို တက္ကသိုလ်မှာလာပြီး ဖြုန်းနေတာပါပဲ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ တက္ကသိုလ်ကထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်… အချိန်ကျရင်အားလုံး အဆင်ပြေ သွားမှာပါလို့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။
ခု ပြန်စဉ်းစား ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုပါ။ ကျောင်းက ထွက်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းဘဲ မတက်ချင်ဘဲ တက်နေရတဲ့ အတန်းတွေကို တက်စရာ မလိုတော့တာကြောင့် တက်ချင် စရာကောင်းတဲ့ အတန်းတွေထဲမှာ ဝင်ထိုင် ကျောင်းသား လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကဗျာဆန်တာတွေရော ကဗျာမဆန်တာ တွေရော ပါပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ နေစရာ အခန်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Coke ပုလင်းတွေကို လိုက်စုပြီး ပြန်အပ်လို့ရတဲ့ တစ်ပုလင်း ၅ ဆင့်ဆိုတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ဗိုက်ဖြည့်ရပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညတိုင်း ခုနှစ်မိုင် လမ်းလျှောက်ပြီး Hare Krishna ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမှာ ထမင်းတနပ် အဝ သွားစားရပါတယ်။ စားလို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
စူးစမ်းလိုစိတ် နောက်လိုက်ရင်း၊ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာတွေကို လိုက်လုပ်ရင်း ကြုံကြိုက်ခဲ့တာ အတော်များများဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အဖိုးမဖြတ် နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာလေးတစ်ခု အနေနဲ့ ပြောပြရရင်တော့….
အဲဒီ အချိန်က Reed ကောလိပ် မှာရှိတဲ့ စာလုံးအလှရေးနည်း သင်တန်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အကောင်းဆုံး သင်တန်းပါ။ တက္ကသိုလ်နယ်မြေ တစ်ခုလုံးမှာ ရှိသမျှ ပိုစတာတွေ၊ စာတန်းတွေ၊ နာမည်တွေဟာ အင်မတန်လှပတဲ့ လက်ရေးစာလုံးတွေနဲ့ ခြယ်သထားပါတယ်။ ကျောင်းက ထွက်လိုက်ပြီ ဆိုတော့ ပုံမှန်သင်တန်းတွေ တက်စရာ မလိုတော့တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ စာလုံးအလှ ရေးနည်း သင်တန်းကို ဝင်တက်ပြီး အတတ်သင်ခဲ့ပါတယ်။ စာလုံးပုံစံတွေထဲမှာ Serif စာလုံးပုံ၊ San Serif စာလုံးပုံတွေ အကြောင်းကို သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ စာလုံးတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကြားမှာ ဘယ်လို အနီး အဝေးခြားတယ်ဆိုတာ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
စာလုံးရေးနည်း ပညာရဲ့ နက်ရှိုင်းမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပညာရပ်ဟာ အင်မတန်လှပတဲ့၊ သမိုင်းဝင်တဲ့၊ အနုပညာမြောက်ပြီး၊ သိဎ္ပံနည်းနဲ့ စူးစမ်းလို့ မရတဲ့ ပညာပါ။ဒီပညာရပ်က ကျွန်တော့်ကို ညှို့ယူ ဖမ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ဘယ်လို လက်တွေ့ အသုံးဝင်မလဲဆိုတာကိုတော့ မျှော်လင့် မထားခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ နောင် ၁၀ နှစ် အကြာမှာ ပထမဆုံး Macintosh ကွန်ပျုတာကို ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ အခါမှာတော့ ဒီပညာရပ်ကို ပြန်လည်ပြီး သတိရလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပညာရပ်ကို အစွမ်းကုန်သုံးပြီး Mac ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ Mac ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး စာလုံးအလှတွေ သုံးတဲ့ PC ကွန်ပျုတာပါ။ တက္ကသိုလ်က ဒီသင်တန်းကိုသာ ကျွန်တော် မတက်ခဲ့ရင် Macintosh ကွန်ပျုတာ မှာ အင်မတန် သေသပ်ပြီး အစိပ်အကျဲ အချိုးကျ လှပတဲ့ စာလုံးတွေ ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ Windows ဆိုတာကလဲ Mac က စာလုံးတွေကိုဘဲ ကူးချထားတာဆိုတော့ PC တွေပေါ်မှာ စာလုံးအလှ ပေါ်ထွက်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး လို့တောင် ပြောကောင်း ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် ကျောင်းမထွက်ခဲ့ရင် စာလုံးအလှသင်တန်းကို တက်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါ။ ဒီသင်တန်းကို ကျွန်တော် မတက်ခဲ့ရင် PC တွေပေါ်မှာ စာလုံးလှလှ လေးတွေ ရှိကောင်းမှ ရှိမှာပါ။ မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ်အခါကတော့ အနာဂါတ်ကို ကြိုမြင်ပြီး ဒီအကျိုး အကြောင်းတွေကို ဆက်စပ် ပုံဖော်ကြည့်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။
နောင် ၁၀ နှစ်ကြာအပြီး အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီဆက်စပ်မှုတွေကို ရှင်းရှင်းကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့အနာဂါတ်မှာ ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်စပ်ပုံပေါ်လာမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်ပါ။ နောက်ပြန် ကြည့်မှသာ ဆက်စပ်မှုတွေကို တွေ့နိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဘွဲ့ရ မောင်မယ်တို့တွေဟာလဲ အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်ရပ်တွေ ဆက်စပ်ပြီး ပုံပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် ထားရပါလိမ့်မယ်။ ဘွဲ့ရ မောင်မယ်တို့တတွေဟာ မိမိရဲ့ ရင်တွင်း ခံစားချက်ကို ယုံကြည်မှုရှိပါ။ ကံစီမံ တယ်ဆိုတာ ယုံပါ။ ကံ၏ အကျိုးဆိုတာ ယုံပါ။ ( ဒီနေရာမှာ ကံဆိုတာ အလုပ် ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် )
တစ်ခုခုကိုတော့ ယုံပါ။ ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့် ကျွန်တော် ချောက်ကျခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေခဲ့တာ ဒီ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပါပဲ။
ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း နှင့် အတွေး အပိုင်းအစ များ
(၁) တကယ်တော့ ဘဝကို လွယ်လွယ်နဲ့ သာ အရှုံးပေးကြစတမ်းဆို Steve Jobs က ပိုပြီး လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးခဲ့မှာပဲ… လူမဖြစ်ခင်ကတည်းက မိခင်ရင်းရဲ့ ရင်ခွင်နဲ့ ဝေးရာမှာ လူလားမြောက်ဖို့ဇာတာပါလာတယ်… မိခင်ရင်းရဲ့ ရင်ခွင်နဲ့ဝေးသူ တော်တော်များများဟာ ဆိုးသွမ်းတတ်ကြပေမယ့် သူကတော့ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်…… [ ဒီလောက် ကမ္ဘာကျော်မယ့် ကလေးကို မွေးခဲ့တဲ့ မိခင်ရင်း အနေနဲ့ သူမ သားကို စွန့် ပစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် နောင်တ ရမိမယ်လို့လည်း တွေးမိပါတယ်…Steve Jobs အနေနဲ့ လည်း သူ့ကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ အခက်အခဲရှိလို့ သူတစ်ပါးကို စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ အပြီးအပိုင် လွှဲပြီးမွေးစားခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ မွေးမိခင်ကို ဘယ်လိုများ သဘောထားလိုက်လေမလဲ ?.. ပြီးတော့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မွေးမိခင်က သူ့ သားကို သူတစ်ပါး လက်ထဲ အပ်တာတောင် ပညာတတ်သည့် မိဘထံကိုသာ အပ်တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူမ မပြုစု မပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူမ သားကို ပညာတတ် ဖြစ်စေချင်ကြောင်း သိရပါတယ်…ပစ်စလတ်ခတ် ပေးခဲ့တာ မဟုတ်မှန်း သေချာခဲ့တယ်…တပြိုင်နက်တည်း သူ့ ဆီမှာ အဖေအရင်းဆိုတာလည်း လက်ညှိုးထိုးပြစရာ မရှိခဲ့ပါ… (အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရ သီးသန့် ယောက်ျားယူထားခြင်း မဟုတ်သေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူနဲ့ ရတဲ့ ကလေးပါဟု မပြောနိုင်သေးပါ) ]
(၂) ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်း ပျောက်နေခဲ့တယ်….ဝါသနာ မပါတာကိုတော့ အတင်း ဇွတ်မလုပ်နေခဲ့ဘူး… ပြီးတော့ အလေမလွင့်ခဲ့ဘူး..အပေအတေ မလုပ်ခဲ့ဘူး… အနည်းဆုံး သူဝါသနာပါရာတွေတော့ လုပ်နေခဲ့တယ်…အဲဒီလို ဝါသနာ ပါရာကို သင်ကြားခဲ့ခြင်း သူ့ ဘဝကိုသာ မက လူ့ သမိုင်းကိုပါ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်….
(၃) စာလုံးအလှရေးနည်းသင်တန်းမှာ သင်ခဲ့တဲ့ စာလုံးအလှတွေကို Mac မှာ အံဝင်ခွင်ကျ ဆက်စပ်ပြီး သုံးနိုင်တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ ရဲ့ ဆက်စပ်ချတတ်မှုက ချီးကျူးစရာလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်…
(၄) သူက သူဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို သိနေခဲ့တယ်…ပြီးတော့ သူလုပ်မယ့် အလုပ် အောင်မြင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်မှု ရှိတယ် အခြေအနေနဲ့ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတယ်…ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် ကြောက်ရွံ့မနေခဲ့ဘူး…တွန့် ဆုတ်မနေခဲ့ဘူး…. ယုံကြည်ချက် ပြင်းပြင်းပြပြ ဆိုတာမျိုးကို အသက် ၂၀ မတိုင်ခင်ကတည်းက တိတိကျကျ ရှိနေခဲ့ပြီးသား ဖြစ်တယ်…
(၅) အသက်၂၀ မပြည့်ခင် အရွယ်မှာ ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် အသက် ၂၃ နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၁ သန်းတန်တဲ့ လူ… အသက် ၂၄ နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော်တန်တဲ့ လူဖြစ်ခဲ့ပြီး…အသက် ၂၅ နှစ်မှာတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ တန်တဲ့ လူ အဖြစ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…. ကျွန်တော်တို့ ရော…ကိုယ့်လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ အသက်အရွယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်တန်ပြီလဲ လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြောနိုင်ပြီလား…???
(၆) တကယ်တော့ ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်းဆိုတာ အတိတ်က အခြေအနေ တစ်ခုနဲ့ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် အခြေအနေတို့ကို ခြားနားလိုက်ခြင်းတစ်မျိုးလို့ ပဲကျွန်တော် နားလည်မိတယ်… အဲဒီနှစ်ခုကို ခြားနား လိုက်တာနဲ့ အနာဂတ်ဆိုတာကို အနည်းဆုံးတော့ ရေးရေးလေးမဆို ပုံဖော်နိုင်မယ်လို့ ယူဆလို ပါတယ်… ခြားနား သုံးသပ်ပြီးသွားလို့ ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်တိတိကျကျ သိရလို့ အတိတ်မှာ ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုမျိုး ရှိခဲ့ရင်..ကောင်းတာကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းပြီး.. ပြုပြင်သင့်တာမျိုး ဆိုရင်..အချိန်မဆိုင်းဘဲ ပြုပြင်သင့်ပါတယ်..အဲဒီမှာ တစ်ချို့ က… စဉ်းစားတွေးခေါ် သုံးသပ်ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ကြတယ်… တစ်ချို့ ကတော့…. အတွေးနဲ့ တင်အချိန်ကုန်သွားတယ်…အတွေးရဲ့ နောက်က အလုပ်(Action) ဆိုတာ လုံးဝ ပါ..မလာဘူး…
(၇) နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Steve အနေနဲ့မတူညီတဲ့ အခြေအနေတိုင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘဝပေး ဆိုတာကို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံတတ်တယ်.. ဆိုလိုချင်တာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့မရပ်တည်ခဲ့ရလို့ ဝမ်းနည်းမနေဘူး..အသိတရားနဲ့ အရှိတရား ကို ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်တယ်.. လက်ရှိအခြေအနေဆိုတာကို လက်မခံတတ်ရင် ( မိအေးနှစ်ခါ နာ ) ဆိုသလို နှစ်ခါ ရှုံးတတ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တယ်…
ကျွန်တော်တို့ ရော လက်ရှိ အခြေအနေ ဆိုတာကြီးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လက်ခံနိုင်သလား..?
ဒါမှ မဟုတ်ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုဆီကို ဦးတည် ကြိုးစားနေသလား…?
ဒီအချက်တွေကတော့ ကျွန်တော် ဆင့်ပွား တွေးမိသလောက်ကို မျှဝေပေးခြင်းပါ…မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲပိုင်ခွင့်.. ယူဆပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်….
(၂) ချစ်ခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှု ( Love & Loss ) နဲ့ 
(၃) သေခြင်းတရား ( Death ) ဆိုတာကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်…
( အိမ်ဝေးသူ )
Tags: Apple, EinWayThu, M-Media_Blog, philosophy, Steve Jobs